Dowladda Federaalka oo gar-gaarkii ugu horeeyay u direysa Beledweyne | Somsoon
Home WARAR Dowladda Federaalka oo gar-gaarkii ugu horeeyay u direysa Beledweyne
Iyado oo magaalada Beledweyne ee xarunta gobalka Hiiraan uu ku fatahay wabiga Shabeelle dadkii magaladana badankood ay ka barakaceen fatahaada wabiga ayaa dowladda federaalka Soomaliya waxa ay diyaarado magaalada Beledweyne ku gaarsiineysa gurmadkii ugu horiyey ee dadkaasi ay helaan.
Wasiir ku xigeenka wasaarada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ayaa shegay in dowladda ay ka go’antahay in dadka reer Beledweyne la gaarsiiyo gurmad deg deg ah si dadka gudaha magaalada ka barakacay ay u helaan meel ay ku noladaan iyo agabkii ay isticmaali lahayeen.
Wasiirku waxa uu shegay in laba diyaradood oo sida teendhooyin bustayaal iyo mara kaneeco ay gaari donaan magaalada Beledweyne saacadaha nasoo aadan si dadku ay u helaan meel ay ka galaan kulelka maalintii iyo qabowga habeenkii jira.
Wasiir Cabdirashiid Maxamuud Xasan waxa kale uu shegay in barito ay diri donaan diyaarado kale oo sida rashin iyo dawooyin, isago intaa ku daray in ay baqdin ka qabaan in biyuhu ay garaan garoonka diyaradaha magaalada madaama uusan garoonku aheyn mid si casri ah oo dhisan.
Fataahada Wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa ah mid soo noqnoqotay maadaama Sanadkii hore sidaan oo kale wabiga uu ugu fatahay magaalada, taas oo sababtay in muda lix bil ah aanan magaalada lagu soo laban waxaana dadkii ka qaxay magaalada ay hada ku suganyihiin degaanka Ceel-Jaale ee duleedka magaalada Beledweyne.
Article horeWararkii ugu dambeeyay ee rabshadaha Itoobiya iyo in ka badan 60 ruux oo la dilay
Article socoda Dad hor leh oo ku biiray dibad baxyadda Chile